Iphansi Lamp, i-LED Underground Light, Ithebula Lamp - Chaoqun
I-Torchiere Floor Lamp
Khulisa Ngocingo Lamp
Ilambu Laphansi Elikhulisayo
Ilambu Lethebula Elikhulisayo
Isibani sethebula le-Clamp
LED Ithebula Lamp
Ilambu Ithebula Lokushaja Okungenantambo
Isibani sedeski le-LED elineshaja engenantambo
Isitayela esihle sanamuhla esinokukhanyisa okwehlukile, lesi sibani sedeski semvelo sasemini sihle njengoba sisebenza. Isebenza kahle kakhulu, lesi sibani sedeski le-LED sibonisa ingalo eguquguqukayo, enika amandla ukulungiswa okulula njengoba kuvumelana nezidingo zakho.
Floor Lamp12w Bright Led Floor Lamp
Ubuhlalu bezibani ze-LED njengomthombo wokukhanya, akukho ukukhanya, ukuvikelwa kwamehlo ngaphezu kwamalambu endabuko we-incandescent, i-12w LED ekhanya ngokwanele ukukhanyisa igumbi lakho. Ikhanya i-900-1000 Lumens ekhanyayo - kepha idonsa kuphela amandla kagesi ayi-12W.
Vumela amakhasimende azizwe ekhululekile ngemikhiqizo ayisebenzisayo
Iphrofayela Yenkampani :
IShaoxing Shangyu Chaoqun Electric Appliance Co., Ltd. yasungulwa ngoJuni 2012 futhi itholakala endaweni yezimboni, idolobha laseShangpu, isifunda saseShangyu, idolobha laseShaoxing, esifundazweni saseZhejiang, eChina. Ngethrafikhi elula, kuzothatha ihora elilodwa nje ngemoto ukusuka efektri yethu ukuya esikhumulweni sezindiza samazwe omhlaba saseHangzhou. Ngokucishe kube yiminyaka eyi-10 yokuthuthuka, sinemishini yokusebenzela yesimanje engaphezu kuka-5000 square metres; nabasebenzi abangochwepheshe abangama-50 abanolwazi olunothile ezinkambeni zemikhiqizo yokukhanyisa yendawo yokuhlala kanye nokubeka phezulu izixhobo ezikhethekile eziphambili zokukhiqizwa kwenqwaba, ukuhlangana nokuhlolwa ukulawula ngokuqinile ikhwalithi yomkhiqizo ngenhloso yokwaneliseka okugcwele kwamakhasimende.
IHong Kong (HK) Fairing Fair
IHong Kong (HK) Lighting Fair ingenye yezindawo zokukhanyisa ezinkulu kunazo zonke emhlabeni ezihlinzeka ngamathuba amakhulu ebhizinisi kubo bobabili ababonisi nabathengi, futhi yahlala, ingenye yemicimbi yezohwebo ebaluleke kakhulu yalolu hlobo ikakhulukazi embonini yokukhanyisa kuze kube manje. Umbukiso wokukhanyisa we-HK unikezwe abaningi ...
Izizathu ezingama-25 ezithembekile zokuthi kungani kufanele ushintshele kwizibani ze-LED
1. Ama-LED ahlala ngokuhlaba umxhwele Uyazi ..? Ukuthi ezinye izibani ze-LED zingahlala iminyaka engama-20 ngaphandle kokuphuka. Yebo, ufunda lelo lungelo! Izindawo ze-LED ziyaziwa ngokuqina kwazo. Ngokwesilinganiso, isibani se-LED sihlala amahora angama- ~ 50,000. Lokho kuphindwe izikhathi ezingama-50 kunama-incandescent bulbs kanye nezine ...
Industrial Zone, iShangpu Town, iShangyu District, iShaoxing City, Isifundazwe saseZhejiang